Ny orinasa naorina hitsena ny GMP fitsipika ary mitondra feno nandroso napetraka ny famokarana sy ny fitaovana fitiliana. Ny famokarana akora ahitana tsipika grinder, fitrandrahana tanky, vacuum concentrator, tsangana chromatography, biolojika manify fitaovana fanadiovana, telo - tsangana centifuge, vacuum paharitry fitaovana, dipoavatra paharitry fitaovana sy ny fitaovana mandroso hafa. Rehetra-paharitry, mampifangaro, nampirina entana sy ny dingana hafa ao an-dakilasy dia natao 100.000 faritra madio, manaraka ny GMP hentitra sy fitsipika ISO.
Isaky ny vokatra, dia efa lasa feno tsipiriany sy ny fomba famokarana manaraka ny sombin-kanina Standard. Ny mpiasa rehetra efa tsara ofana, ary tsy maintsy mandalo fanadinana hentitra alohan'ny izy ireo navela miasa eo amin'ny famokarana tsipika. Ny fomba iray manontolo no nitarika, ary araha-maso amin'ny alalan'ny ekipa mpitantana ny famokarana za-draharaha. Ny dingana tsirairay dia antontan-kevitra sy ny asa traceable eo amin'ny firaketana an-tsoratra.
Ankoatra izany, manana hentitra amin'ny fanaraha-maso resadresaka-toerana fifanarahana izay tafiditra santionany, fanaovana fitiliana sy ny fandraisam-peo taorian'ny dingana manan-danja rehetra ao an-pamokarana.
Ny orinasa sy ny vokatra maro izay no lasa hentitra fisafoana tanterahana amin'ny alalan'ny sarobidy mpanjifa avy amin'izao tontolo izao. Ny tahan'ny simba ny raokandro voajanahary koa omen'ny dia latsaky ny 1%.